Olee otú Play DVD na Ubuntu
Ubuntu bụ ihe kasị nkịtị sistemụ maka Linux, a na-ahụkarị na ụfọdụ ndị na-eji okwu na nka weba na. Ọ bụ n'ezie a Nchikota software omume dị ka Firefox, LibreOffice, na ndị ọzọ freeware omume. Ubuntu nwekwara ike na-agba ọsọ na-akwụ ụgwọ omume dị ka Microsoft Office otú ahụ ogologo oge dị ka i nwere a mebere igwe ma ọ bụ ihe dị ka Wine arụnyere. Mgbe ọ na-enye gị ohere fọrọ nke nta na-akparaghị ókè plọg na play ndakọrịta na obere ngwaọrụ dị ka a igwefoto ma ọ bụ onye MP3 ọkpụkpọ, ọ na-adịghị na-akpaghị aka maara otú na-egwu DVD. Ọ bụ pụtara mfe iji dozie na ina malitere-ekiri ihe nkiri na gị Linux igwe.
Ná mgbalị gị na-egwu na fim, ị pụrụ ebudatara Ubuntu Amachibidoro Extra ngwugwu ma ị ma na ka na-adịghị ike igwu egwu a DVD. Nke a bụ n'ezie nnọọ nkịtị, karịsịa maka ọrụ nke Ubuntu 13,10 ma ọ bụ 14,04.
E nwere usoro ihe omume a na-akpọ libdvdread na Ubuntu Software Center na i nwere ike Ibu Ibu na-enwe ike iji na-agụ DVD. Ọ na-eme nke a site na-eke ihe Ubuntu n'ọbá akwụkwọ faịlụ. Ozugbo ị chọtara ya na Software Center, ị ga-mkpa Ibu Ibu a ngụkọta nke abụọ faịlụ - libdvdread4 na libdvdnav4. Wụnye ha ma wee họrọ ctrl - alt - T na-emeghe ọnụ. Ma ọ bụ, ị nwere ike pịa ọnụ site na isi na ihuenyo.
Pịnye na-esonụ iwu - sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh, na ị ga-na ụzọ gị na-egwuri egwu DVD.
Alternatively, iji wụnye ha i nwere ike pịnye sudo apt-na-wụnye libdvdread4 na sudo apt-na-wụnye libdvdnav4. Ozugbo ha na e arụnyere, ị ga-mkpa reboot gị na kọmputa.
Ọ bụrụ na ị rụnyere omume dị ka VLC ma ọ bụ Totem, ị ga-ugbu a na-enwe ike iji usoro ihe omume menus na-egwu, ngwa ngwa n'ihu, ma weghachi, dị ka ị ga-on a n'ụlọ DVD ọkpụkpọ, ebe ọ bụ na ị ga-kwajuru ndị dị mkpa codecs.
Ọzọ omume ị kwesịrị ị na Ibu Ibu bụ libdvdcss si Software Center. Ọ na-abịa ma na 32 bit na 64 bit nsụgharị. Ya anya ka nke a:
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji wụnye omume na iji ọnụ, na-aga sudo apt-na-wụnye libdvdcss libdvdread4 libdvdnav4 ha niile ga-wụnye otú ahụ, kwa. Ị nwekwara ike ịnwe ka ikpo mpaghara gị koodu, ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị gbagote ndabara. Nke a bụ ihe ọnụ ga-ele anya dị ka.
Ebe a bụ ya mere i kwesịrị ndị a faịlụ. libdvdcss2-enye ohere Ubuntu mata na DVD; libdvdread4 ga, dị ka aha-apụta, na-ekwe ka kọmputa na-agụ DVD; na libdvdnav4 enye ikike ịnyagharịa gburugburu DVD. Na-enweghị ndị a faịlụ, ị ga-akọ ndị dị mkpa codecs na-enwe ike ibu ma na-ele gị na fim.
Ị nwekwara ike ịhọrọ ibudata a DVD ọkpụkpọ usoro. N'ihi na ọtụtụ Linux igwe, ị download ọkpụkpọ jidesie a flash mbanye wee wụnye ya na akụrụngwa si n'ebe ahụ. Ị nwere ike ịhọrọ site na a ọnụ ọgụgụ nke free omume, gụnyere VLC, Totem, Kaffeine, Real Player 10, na Xine, dị nnọọ ole na ole aha. Ndị ọzọ omume na-ere na Ubuntu Software Center maka a ezi uche na-eri.
Otu n'ime ugwo omume a na-akpọ Fluendo.
Ka ị pụrụ ịhụ, o nwere nnọọ ọcha interface na mfe ịghọta na ojiji njikwa.
Ị nwere ike ịnweta VLC ma ọ bụrụ na ị dịghị ama nwere ya ebudatara site na ịga na ọnụ na dee sudo apt-na-wụnye VLC ma ọ bụ site na ịga na Software Center na nbudata na ya. Ị ga-ka dị mkpa ka ibudata libdvdcss2 omume na-ekwe ka Ubuntu mara ihe na-eme na diski.
Ka anya na VLC dị ka ihe atụ. Ozugbo i ebudatara ya, ị pụrụ hazie ya anya Otú ọ dị ị chọrọ ka ọ.
Ebe a bụ isi interface page.
Ẹkedori VLC, ị ga-emeghe dashboard na-amalite na usoro ihe omume. Ọ bụrụ na ọ na-amalite na-egwu nkiri na ya, ị nwere ike ịga ruo Njikwa, wee pịa Open Disc. Site n'ebe ahụ, pịa play, gị na nkiri kwesịrị amalite. Ị nwere ike ịlele nkiri na ihuenyo zuru ma ọ bụ na nta igbe n'elu isi Ubuntu ihuenyo. Gị njikwa na ala, gụnyere imekwa, ịkpọgharịa, play, kwụsị, ngwa ngwa n'ihu, ma weghachi. Gị olu akara bụ na nnọọ ala n'akụkụ aka nri.
Totem na-arụ ọrụ ọtụtụ otú ahụ. Mepee usoro ihe omume, ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị na-amalite na-egwu gị nkiri ozugbo, pịa Movie, mgbe ahụ, Open. Ọ ga-eweta ruo a nhọrọ na menu n'aka-ekpe n'akụkụ. Site n'ebe họrọ Gwuo.
Gị Totem njikwa na-kwekọọ gafee ala. On n'aka nri akụkụ ị ga-enwe ike iru a playlist bụrụ na ị chọrọ. Ozugbo gị nkiri a bụ loaded na njikere ele, nwere gị popcorn njikere na-enwe film!
Ya mere, gịnị, i nwere ike ịjụ, ị na-eme nke a? Gịnị mere na ọ bụghị ya akpaka na i nwere ihe ọkpụkpọ DVD usoro ihe omume Ubuntu? Ọ nwere na-eme na ikikere nkwekọrịta. Ọ bụrụ na usoro ihe omume bịa tupu-bundled na Ubuntu,-emepụta ga-akwụ ụgwọ royalties, na na ga-Ubuntu ịbụ free niile. The nkwa na mmepe mere ka Ubuntu ọrụ bụ na ọ ga-abụ n'efu, mgbe niile. Ma, site n'inwe ike ibudata na faịlụ na mmemme mgbe e mesịrị, na ị na-enwe ike ịnweta a ọrụ iwu-gburugburu n'ihi na ọnọdụ ahụ.
Linux kọmputa na-abụkarị ndị na-ahọrọ nke na kọmputa ndị n'ihi na ha nwere ike kpamkpam ahaziri na nyeere ime ihe ọ bụla onye ọrụ chọrọ ka ha. Inwe ike na-egwu a DVD dịghị ma e wezụga. Na inwe ike họrọ ihe omume ị chọrọ, dabeere na gị onwe gị ule, ị ga-enwe usoro ihe omume ị ga-n'anya, kama ihe na kọmputa emeputa ama na-arụ ọrụ a ikikere ndokwa maka.
Plus, mgbe i nwere ike Ibu Ibu freeware DVD ọkpụkpọ gị oke, ị na-edebe na mmụọ nke Linux na Ubuntu, ikwe okike uche-anọgide na-ịzụlite software kpam kpam. Ụwa nke freeware mmemme bụ-akpali akpali, na otutu echiche na-kwụsịrị kwalitere ma na-ekesa mfe. Ebe ọ bụ na ha adịghị enwe nchegbu banyere agbalị gbagote na haziri nzukọ, ha na-enwe na-elekwasị anya na ha creativity nanị na-amị omume ha.
Anyị na-atụ a nkuzi enyeworo anya ọ bụla mbipụta na-na-DVD na na na a Linux igwe. Nwere fun, na-eche free nnwale, na-enwe gị nkiri collection ọzọ.
The Ọkụ DVD agaghị akpọ na DVD Player? Edozi.
8 Atụmatụ maka ị jide iDVD gburugburu
Olee otú Tinye ndepụta okwu na DVDStyler
Top 10 Alternatives ka DVD kpatụ aka gaa na
Olee otú Ọkụ Video faịlụ ka DVD on OS X Yosemite
Windows DVD Onye kere VS Wondershare DVD Creator
> Resource> DVD> Top 10 Best Ubuntu DVD Players